काठमाडौं । कलि युगको आशय “अँध्यारो युग” हो । हाम्रो सौर्यमण्डलले राशीचक्रलाई पूरा परिक्रमा गर्नको लागि २५,९२० वर्ष लगाउँछ । यदि तपाईंले यो चक्रलाई दुई भागमा बाँड्नुभयो भने, चारवटा युगहरू दुईपटक आउनेछन्, यसरी कुल आठ युगहरू हुन्छन् । यिनमा कलि युग र सत्य युग मात्र एक आपसमा जोडिएका हुन्छन्— अर्थात्, दुईवटा कलि युग र दुईवटा सत्य युग सँगसँगै आउँछन् । जबकि, अन्य दुई द्वापर युगहरूबिच दुईवटा कलि युग अनि दुई त्रेता युगहरूबिच दुईवटा सत्य युग आउँछन् ।
कलि युग फरक हुनुको कारण के हो भने, जुन 'विशाल सूर्य' को वरिपरि हाम्रो सौर्य मण्डलले परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ, यस युगमा ती बिचको दुरी निकै बढी हुन्छ । यी दुईबिच जति दुरी बढ्दै जान्छ, यस धरतीमा मानिसहरूको बुद्धिमत्ता र समझदारी त्यति नै कम हुन्छ । कलि युगमा यी दुवैबिच अत्यन्तै बढी दुरी हुने भएकोले मानव बुद्धि सबैभन्दा तल्लो स्तरमा हुन्छ । जबकि, त्यसपछिको युगमा सौर्य मण्डल 'विशाल सूर्य' को नजिक पुग्ने भएकोले मनुष्यको बुद्धिमत्ता निखारिन थाल्छ, प्रस्फुरित हुन थाल्छ । यहाँ सम्म भनिएको छ कि जसैजसै हाम्रो सौर्य मण्डल 'विशाल सूर्य' को नजिक जान्छ, मनुष्यको प्रणालीमा हुने विद्युतीय र चुम्बकीय बललाई बुझ्ने र प्रयोग गर्ने मानव क्षमता बढ्दै जान्छ । जब तीबिच दुरी बढ्दै जान्छ, त्यो क्षमता घट्दै जान्छ ।
प्रकाश अथवा प्रज्ञा तपाईंबाटै आउनुपर्छ भन्ने छैन— यो दैवीय सम्भावनाको कारणले सम्भव हुन्छ, किनकि सौर्य मण्डल अर्को युगमा प्रवेश गरिरहेको हुन्छ । जसकारण, तपाईंको बुद्धिमत्ता वा प्रज्ञाको स्तर माथि उठ्नेछ । यो अलौकिक उपहार हो, साथै अन्तरिक्षमा केही यस्ता तारामण्डलहरू छन्, जुन उडिरहेको घोडा जस्तै देखिन्छन् । त्यसैले, कोही अवतरित भएर तपाईंको अन्धकार नष्ट गर्नेछन् भनिएको थियो । तर, यदि अन्धकारलाई हटाउनु पर्ने हो भने, कोही पनि घोडामा चढेर तल आउनुपर्दैन । यदि तपाईंले सानो ज्योति बाल्नुभयो भनेपनि, अन्धकार आफैँ मेटिन्छ । अन्धकार क्षणभङ्गुर हुन्छ, तैपनि मानिसहरू यसबाट उम्कन सक्दैनन्, किनकि उनीहरू गलत तरिकाहरू अपनाउँछन् । यदि तपाईंले ज्योति बाल्नुभयो भने, अन्धकार आफैँ हट्छ । यसैकारण, प्रतिकात्मक रूपमा यो भनिएको थियो कि एक दिव्य जीव वायुपङखी घोडामा आउनेछन् अनि अन्धकार हटाउनेछन्— यदि तपाईंले त्यो अन्धकारलाई आफूभित्र जीवित राखि नरहने हो भने !
शाकाहारी भोजन किन लाभदायक छ ?
प्रश्न: शाकाहारी खाना खानु किन लाभदायक छ अनि हामीले आफ्नो जीवनमा यसलाई कसरी अपनाउन सक्छौँ ? सद्‌गुरु: तपाईंले कस्तो किसिमको खाना खानुपर्छ भन्ने कुरा, भोजनबारे तपाईंको सोचाइ कस्तो छ अनि तपाईंका
प्रश्नः नमस्कार सद्‌गुरु । के कृष्णले बुद्धत्त्व (आत्मज्ञान) पाउनुअघि कुनै किसिमको साधना गरेका थिए ? कुन कुराले उनलाई जीवनमा त्यस अवस्थासम्म पुऱ्यायो ? सद्‌गुरूः कृष्णको साधनाको कुरा गर्नुपर्दा— एउटा मानिसको लागि
हाम्रो जीवनमा रुद्राक्षको महत्त्व- कुन रुद्राक्ष उत्तम ?
रुद्राक्ष विशेष किसिमको वृक्षको दाना हो । साधारणतया, यो पहाडी क्षेत्रहरूको निश्चित उचाइमा वा हिमालयमा पाइन्छ । अचेल नेपाल, वर्मा, थाईल्यान्ड र इन्डोनेशियामा रुद्राक्षको वृक्षहरू पाइन्छन् । दक्षिण भारतको पश्चिमी
'मृत्यु' जान्नको लागि पहिला जीवनलाई जान्नुहोस् !
मृत्यु एकदमै मूलभूत प्रश्न हो । हामीले मृत्युको बारेमा जे–जति तथ्याङ्कहरू पढ्ने गर्छौँ, त्यसको तुलनामा मृत्यु वास्तवमै हाम्रो निकट छ । हाम्रो शरीरका अङ्ग र कोशिकाहरूको स्तरमा हरेक क्षण मृत्यु